Thant Thaw Kaung’s Major Award : Nargis Library Recovery
This is wonderful recognition for our partner, Dr. Thant Thaw Kaung. Read further~~~!
Wednesday, 16 April 2014 | Judith Platt
« Dark Side of Accessing Global Knowledge
Interesting Political Forecast by Aung Din »
အိပ်မက်သစ်သို့ လာရောက်လေ့လာသည့် ဦးဇင်းထံမှရလိုက်သော ဗဟုသုတနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ
အလိမ္မာပျိုးခင်း စာကြည်တိုက်(သထုံ)မှ အိပ်မက်သစ်သို့ 8.9.2016နေ့တွင် လာရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။အိပ်မက်သစ် စာကြည့်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ပုံ ယခုအချိန်ထိ ရပ်တည်ပုံ ကွန်ပျူတာခန်းနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မဲ့ အစီအစဉ်များကိုိရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အလိမ္မာပျိုးခင်းတည်ထောင်သူ ဦးဇင်းမှလည် စာကြည့်တိုက်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြောပြတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့အိပ်မက်သစ်တွက် အားကျစရာ လေ့လာစရာ များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ဦးဇင်းကိုလည် ကြည်ညိုစိတ် များစွာဖြစ်ရပါတယ် ကွန်ပျူတာသင်တန်းကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သင်ပါတယ် ကျောင်းတွက်စာပြရပါတယ် အပတ်စဉ်စာပေဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ပါတယ် စာပေဆွေးနွေးပွဲမှ ထူးချွန်စွာဆွေးနွေးနိုင်သူ၅ဦးအား ဦးဇင်းနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော စာကြည်တိုက်၁၂တိုက်မှ ထူးချွန်သူများနှင့် လေ့လာရေးခရီးထွက်စေပြီး စာတန်းဖတ်ပွဲများပြုလုပ်ပေးပါတယ်။သင်တန်းလာတတ်သူများအား စာဖတ်စေပါတယ် လုပ်ရပ်တွေတွက် များစွာကြည်ညိုရပါတယ်။အိပ်မက်သစ်ကို လာလေ့လာတဲ့အတွက် ဦးဇင်းကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်။
3:00 ... See MoreSee Less
Nyi Zay shared ပျော်ရွှင်သော ကလေးငယ်များ စာကြည့်တိုက် Happy Children Library's post to the group: MBAPF. ... See MoreSee Less
8.9.2016ကျောင်းပိတ်ရက် ညနေ စာလာဖတ်သူကလေးမျာအား ပုံပြင်ပြောပြဖြစ်ခဲ့ ... See MoreSee Less